Home Wararka Gudaha Daawo:- Muqaal” Xasan Sheekh oo war kasoo saaray ‘abaabulka ka dhanka ah’...
Daawo:- Muqaal” Xasan Sheekh oo war kasoo saaray ‘abaabulka ka dhanka ah’ Lafta-gareen
“Waxaan rabaa dadka reer Koonfur Galbeed, dowladda federaalka xageeda nabadaa idin ka jirto, saaxibtinimaa idin ka jirto, mas’uuliyad iyo dadkii idin ka aad xilka u dhiibateen si toosan iyo si dadban oo aad idinka wakiilateen ayaa idinka jiro,” ayuu yiri Madaxweynuhu.
Waxa kale oo uu Madaxweyne Xasan Sheekh intaasi kusii daray “Shar, colaad iyo abaabul qaab daran idin kama jiraan xaggaas.”
Madaxweynaha Soomaaliya oo booqashadiisii ugu horreysay ku bilaabay Baydhabo ayaa ugu baaqay reer Koonfur Galbeed inay adkeeyaan nabadda dhexdooda ah.
“Waxaan idin ka codsaneynaa, idin ku adkeyneynaa dhexdiinana inaad sidaas oo kale aad ka dhigtaan, haddii Alle yiraah,” ayuu markale yiri Madaxweynaha Soomaaliya
Hadalkan ayaa ku soo aadayo, iyada oo maalmihii u dambeeyey aad loo hadal hayey ‘Mooshin’ la sheegay in siyaasiyiin mucaarad ku ah Madaxweyne Cabdicasiis Lafta Gareen ay ka wadaan gudaha magaalada Muqdisho, taas oo dhalisay xiisad siyaasadeed oo horleh.
Si kastaba, Lafta Gareen ayaa ka mid ahaa hoggaamiyeyaasha maamul goboleedyada ee sida u dhow u taageersanaa Madaxweynihii hore ee dalka, Maxamed Cabdullahi Farmaajo
Previous articleRaggii ka dambeeyey qaraxiWararkii ugu dambeeyay DAYNIILE oo howlgal lagu soo qabtay
Next articleMD Cosoble ayaa yiri Reer Baladweyne mid mid waa u caqli badan yihiin laakin bulsho ahaan xoolaha ayey la caqli yihiin. Qoraal Xasaasi ah (wax badan ka ogoow)
Daawo:- Hadal jeedinta Xildhibaan Khadiijo Maxamed Diiriye ee xuska 26-ka June
Maxaa looga hadlayaa Kulanka Maanta ee Xildhibaannada labada Aqal?